Garandi - Jade Technology Co., Ltd
Munguva garandi nguva, kana chero dambudziko, tichaita achiedza kukupa mabasa inogutsa. Kuti vave nechokwadi kugamuchira wako wakazara chigadzirwa garandi makomborero, tapota verenga zvikamu nokungwarira:
Tinozivisa sezvo pazasi:
The garandi Nguva Jade zvigadzirwa ndiwo mwedzi 12 kubva musi pakukurukura pamusoro rugwaro nhumbi.
Zvigadzirwa zvose achitengeswa Jade:
A) Mugovere siyana consumable zvinhu kana kutsiviwa zvikamu.
B) Ipai pamwe Long-rokuti yokutengesa rutsigiro: nyanzvi injiniya kuchabatsira kuti varumbidze zvikuru yakakodzera zvinhu pashure pokudzidza zvinodiwa zvenyu vatengi ', uye gadzirisa mhinduro chero anokosha mafomu yenyu.
C) Kuva 2% kudzokera gwara: kana chakaremara zvigadzirwa vari pe2% yenyu rokutenga uwandu, isu achatuma kugadzira zvikamu kwamuri kana kuwedzera muripo wenyu inotevera hurongwa. Asi kana chakaremara zvigadzirwa vanopfuura 2% yenyu kuti uwandu, musafunganya, kudzokera mugaba yose kwatiri achirasikirwa yedu.
Garandi siyana haibatanidzi zvinotevera:
Hazvina anokonzerwa mumuviri kukuvadzwa, mashandiro kunaka, kunze komutemo kuchinja kuti chigadzirwa, uye kuedza kugadzirisa kana zvimwe dzinongoitika kana manmade dzoga.
Kuti uwane mibvunzo, tapota nyorerai nhamba dzinotevera: + 86-136-5584-5675 kana kuzadza wobvunzisisa fomu pa " Taura nesu".